Rangarira makore makumi maviri eApple Studio Ratidza neiyi Pfungwa | Ndinobva mac
Rangarira makore makumi maviri eApple Studio Ratidza neiyi Pfungwa
Tateguru weApple Cinema Display akadaidzwa kunzi Apple Studio Ratidza, akateedzana emonitiri ekushandisa neApple makomputa. Muenzaniso wekutanga wakaburitswa munaKurume 17, 1998. Naizvozvo, mumazuva mashoma Monitor iyi ichave iine makore makumi maviri ekuberekwa.
Kuchengeta makore makumi maviri eApple Studio Ratidza, vakomana vanobva iDrop Nhau ndanga ndichida kugadzira iyo Concept yekuti Apple yekutarisa ramangwana inofanira kunge iri sei. Uye, pamusoro pekuve nezvimwe zvakawanda maficha, hazvingagone kupotsa kuti iyo skrini yaive yakanyatso bata kubata neminwe yako. Asi kana iwe uchida kutsvaga zvakawanda nezve iyi Pfungwa, ramba uchiverenga.
Haishaye chero chinhu ku iyi inofungidzirwa Apple yekutarisa ramangwana. Isu tinorangarirawo kuti avo vanobva kuCupertino vakataura kuti zvegore rino 2018 ivo vakagadzirira tarisiro nyowani yaizosvika zvechokwadi ichiperekedzwa neshanduro nyowani yeMac Pro. Asi tichisiya zviri pamutemo nhau, ngatitarisei pane izvo veruzhinji vangade mune itsva chizvarwa cheki.
Kubva pane chinyorwa ivo vanotaura kuti nhasi kupusa kuti tendeuke tambo; Apple inofanira kuvhura Studio Ratidza -Cinema Ratidza- ine waya isina waya iyo yaigona kubatanidza kune chero Mac kana iOS komputa pasina kushandisa tambo dzisingatarisike.
Kune rimwe divi, OLED ndiyo tekinoroji iri kuzvimanikidza pamusika. Kuti, hapana LCD uye tarisa chete pane OLED mapaneru "Bata, zveshuwa." Kubudirira kunovimbiswa kana ukasarudza nzira iyoyo; iyo iPhone X inoita kunge iri kuita zvakanaka pasi pechisarudzo ichocho. Iyo Concept iyo yavakagadzira ndeye 27-inch OLED yekutarisa.
Zvakare, uye kudzoka kuzobata mascreen uye isina waya kubatana: iyi Pfungwa inodzokera kupfungwa yekuti iyo iPad Pro inogona kuiita kuti ishande se "base" kuti ishande zvakadzikama. Ndokunge, chimwe chinhu chinoitwa neSurface yeMicrosoft nezvayo zvakasiyana mabhesi. Zvingave zvakare nzira nyowani yekuunza nyika mbiri pamwechete: iOS + macOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Rangarira makore makumi maviri eApple Studio Ratidza neiyi Pfungwa
Moses Pinto akadaro
Ndinoziva kuti mune nyaya yekuravira uye mavara hapana chakanyorwa. Iyo inyaya yakasarudzika nyaya.
Ini pachangu, ndaizoida uye ndaizoitenga izvozvi, kana ikatevera maitiro uye chimiro che "iMac 27" asi iine 8-inch 32K OLED yekubata skrini, isina bezel uye kubva kumucheto kuenda kumucheto; yaizodaidzwa kuti iMac XX. Iyo 32-inch iPhone X kunze uye inoshamisa mukati, ruvara: matte sirivheri. Uye, muzasi (hwaro) iyo yakasanganiswa AirPower kuti ikwanise kudzoreredza iyo keypad yenhamba, iwo mashiripiti mbeva, iyo yekubata, iyo iPhone, iyo AirPods, iyo Apple Watch, uye nyowani nyowani-yekudzima mahedhifoni, ese iwo mune imwechete uye isina waya. Tafura yakachena, hapana tambo kumashure, zvese zvigadzirwa zveApple zvinobhadharisa pamwechete pachigadziko chimwe chete, uye panguva imwe chete. Ruoko rwekumashure, runotsigira chidzitiro mumaonero angu chinofanira kunge chakaita 3 kusvika 4 inches kurera kusimudza tarisisa zvakanyanya, zvine chekuita netafura.
Pachave nevanhu vanofarira zano iri, pachavewo nevasingarifarire kana kuona riine kukanganisa.
Pane chimwe chinhu chemunhu wese mumunda wemizambiringa waIshe!
Pindura kuna Moisés Pinto
Maitiro ekugadzirisa sarudzo dzekukumbira iyo iTunes password paApple TV
Iko kukosha kweApple Music kwakatenderedza mabhiriyoni gumi emadhora